एमाले राप्रपा गठबन्धनको चुरो - Everest Dainik - News from Nepal
एमाले र राप्रपा नेपाल गठबन्धनको विभिन्न बयानहरु आउन सक्छन । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसहीत पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन भएकोले सामान्यतया गठबन्धन भएको साधारण अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । तर, यो गठबन्धनको अन्तरवस्तु भने नेपालको समसामयिक राजनीतिलाई अन्यत्र मोड्ने महत्वपूर्ण नाजायज प्रयास हो भन्ने नै लाग्छ । तलका बयानमार्फत यसको चिरफार गर्ने कोशीस गरिने छ ।
पहिलो बयान :
सरल बयान अनुसार एमाले राप्रपाको गठबन्धन आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा दुबै पार्टीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि गरेको हो । सत्तारुढ दलको गठबन्धन बन्ने भएपछि एमाले सोत्तर हुने सम्भावना बढ्दै थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले एक्लै एक क्विण्टलको ढक बाँकी दल किलो, सेर भनेपनि वा एकातिर भैंसी (एमाले) अर्कातर्फ बाख्राको हुल गठबन्धन दल जे भनेपनि एमाले नेतृत्व भित्रभित्रै आतंकीत हुँदै गएको अवस्था हो । उता भर्खरै पुनर्गठीत राप्रपा नेपालको त देशभर कतै एक सदस्यसम्म जित्ने आधार थिएन, छैन । यस्तोमा कतै चिट्ठा परिहाल्छ की भनेर गठबन्धनमा राप्रपा नेपाल एमालेकै चिह्न लिएर लड्न तयार भयो । एमाले ‘टालीटुली बाटुली कती राम्री पुतली’ गर्ने ध्याउन्नमा छ । त्यसको उन्नत पात्र राप्रपा नेपाल बाहेक हुनसक्ने सतहमा कोही थिएन । यसरी यो गठबन्धनको पहिलो बयान तुरिन्छ ।
दोस्रो बयान :
कमल थापा राप्रपाको जनाधार लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा पार्टीको अगाडि एक छेउमा पनि आउँदैन । तरपनि ओलीले थापालाई नै किन रोजे ? लिङ्देन राप्रपालाई किन रोजेनन् ? यो अर्को बयान हो । लिङ्देनलाई छोडेर थापा जस्तो कमजोर पात्रलाई रोज्नु पर्ने आवश्यकता के हो ? यो दोस्रो तर महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसमा ओलीसंग सम्बन्धित प्राविधिक प्रश्न र सैद्धान्तिक मिलेमतो जोडिएको छ । अघिल्लो प्राविधिक प्रश्न मिलेको भएपनि ओलीले लिङ्देनलाई रोज्न पनि सक्तथे । भलै सैद्धान्तिक कुरालाई थाँती राखेर भएपनि । तर, प्राविधिक कुरा मिलेन । दमक नगरपालिका ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो । यहाँ लिङ्देन राप्रपाका राम थापा एमालेको गठबन्धनमा मेयरमा उठ्ने केहि राउण्ड कुरा भयो । तर, ओलीले यो कुरा मानेनन । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै पार्टीको हुँदा सजिलो त हुने नै भयो । तर, राप्रपाले मेयर बाहेक गठबन्धन नहुने संकेत ग¥यो । ओलीको लागि अहिले की उपमेयर गीता अधिकारी (लोकल विद्या भण्डारी)लाइ मेयरको टिकट नदिए अर्को भाँडभैलो त्यहाँ हुन्थ्यो । सैद्धान्तिक कुरा थापाको राप्रपा (थाप्रपा)संग मिल्ने, ओली निर्वाचन क्षेत्रमा लिङ्देन हावी भएको यो रस्साकस्सीमा ओलीले सिद्धान्त रोजे । सिद्धान्त रोज्दा आफ्नो पार्टी पङ्ति यथास्थानमा हुने, सिद्धान्त पनि बच्ने उपाय स्वरुप यो गठबन्धनको चयन भयो । कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र रोजेको तर राजतन्त्र नखोजेको उद्घोष हालै गरेकोले एमालेमा रहेका ‘हिन्दू कम्युनिष्ट’हरुलाई गठबन्धन अप्ठ्यारो हुने कुरा पनि भएन । उता थापाले राजतन्त्र नखोजेको अर्थमा एमालेमा भुलचुक रहेका सिधासाधा कम्युनिष्टहरुलाई एमाले राजतन्त्रवादी नभएको भ्रम दिन पनि त्यत्तिकै सजिलो हुने नै भयो । हिन्दुत्वमा कट्टर, राजतन्त्रमा विवादास्पद विचार राख्ने राप्रपा नेपाल र हिन्दुत्वमा बहँदै गएको र वर्तमान परिवर्तनको विपक्षमा रहेको एमालेसंग यसैकारण गठबन्धन भयो ।
राजनीतिका पारखीहरुले यो गठबन्धनलाई हिन्दूवादीको दुई धारको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । एउटा धार राजासहीतको हिन्दू राष्ट्र मान्ने लिङ्देनको धार र राजारहीतको हिन्दू राष्ट्र मान्ने थापाको धार राजनैतिक बजारमा ल्याएका हुन । पछिल्लो धार बनाउन भारतीय हिन्दूवादी राजनैतिक संगठनको भरथेग छ । पछिल्लो समयमा ओली हिन्दूकृत मान्यतामा लागि परेको अर्थमा पनि यो तर्कको पछि दम देखिन्छ । यसरी ओली–थापा गठबन्धनले साकार रुप लियो ।
तेस्रो बयान :
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धारको विघटन गराउने ओरालो झर्ने सजिलो भरेङको रुपमा यो गठबन्धनको संकेत हो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन यसरी नै विस्तारै विस्तारै विघटन गरिएको थियो । सोभियत संघको विघटन ख्रुश्चेवबाट सुरु गरिएर गोर्भाचोभमा आएर सम्पन्न गरियो ।
नेपाल कै कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यस्तै तरिकाले विघटन गर्ने बारम्बार कोशीस गरिएको थियो । डा. केशरजंग रायामाझीले पनि एक्कासी कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गरेनन् । सत्र सालको राजा महेन्द्रको ‘कु’ लाई समर्थन गरेपनि कम्युनिष्ट पार्टीको एक घटकको नेतृत्व गरिरहे । जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेर भ्रम दिए । जब जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जित्यो रायामाझीले उनको नेतृत्वको पार्टी नै विघटन गरे । र, राजसभाको सभापतिसम्म बने । ओलीको यो यात्रा पनि त्यतै दिशातर्फ केन्द्रित छ । उनी बयल गाडे सिद्धान्तमार्फत थापा मार्गहुँदै एमालेको विघटन गर्न उद्धत भएका हुन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक, समावेशीको त उनी गर्भे विरोधी हुँदै हुन । यी सबै परिवर्तन खारेज गर्न सामन्तकुमार गोयलकै निर्देशनमा ओलीले दुईदुई पटक संसद विघटन गरेर सुरुवात गरेका थिए । तर, असफल भए । फेरीपनि ओली परम्परागत यथास्थितिवादी दक्षिणपन्थी प्रतिगामि तत्वहरुसंग साँठगाँठ गरेर परिवर्तनको किल्ला भत्काउन चाहान्छन् । यसका निम्ति उनले पशुपतिमा सुनको झलारी चडाउँदै, रामजन्मभूमीको ठोरी जगाउँदै, हलेसीमा भेटीघाटी र पाती चढाइ सकेका छन् ।
रेनुको अग्रता फराकिलो, कति ल्याइन् मत ?